Madaxweynaha Jabuuti: ;”Waxaan ka cabsi qabaa in Baarlamaan uu Shabaab maamulo Soomaaliya lagu dhiso” – Radio Daljir
Madaxweynaha Jabuuti: ;”Waxaan ka cabsi qabaa in Baarlamaan uu Shabaab maamulo Soomaaliya lagu dhiso”
Nofeembar 26, 2020 2:32 g 0
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in doorashada laga qabanqaabinayo dalka Soomaaliya ay ku lug yeeshaan ururka Alshabaab.
Ismaaciil Cumar Geelle Madaxweynaha dalka Jabuuti oo wareysi siiyay The Afrika Report ayaa sheegay in uu welwel weyn ka qabo doorashada;
“Doorashada baarlamaanka Soomaaliya waxaa la filayaa inay qabsoonto sanadka 2021-ka, waxaan ka cabsi qabaa inay kusoo afjaranto doorashada xildhibaano si dadban ay u maamulaan Al Shabaab maadama ay gadan karaan taageerada qaar kamid ah xildhibaanada”
Ismaaciil Cumar Geelle Madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa sheegay in saameynta ururka Alshabaab uu ku leeyahay ganacsiga dalka Soomaaliya uu aad u sareeyo ayna lacago faro badan ka soo gasho ururka Alshabaab.
Warkan ka soo baxay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo musharaxiinta shirka ugu dhamaaday magaalada Muqdisho ay soo saareen war murtiyeed ay ku diidan yihiin hannaanka ya u socoto qabashada doorashada dalka Soomaaliya.
Sheekh Shariif gabagabada shirka Midowga Musharixiinta Madaxweynaha muxuu ka yiri ? (Daawo)